Yintoni i-Scraper Site? - Impendulo yeSemalt
iiwebhsayithi usebenzisa ezinye iindlela zokucoca ngewebhu. Lo mxholo uboniswe ngenjongo yokuvelisa imali engenayo, mhlawumbi ngeentengiso okanye ngokuthengisa idatha yomsebenzisi. Iziza ezahlukileyo ezihlukeneyo zihlukeneyo ngeefom kunye neentlobo, ukusuka kwi-website ye-spam ye-spam kwi-website ye-content aggregation kunye neentengiso kwi-intanethi.
Iinjongo ezahlukeneyo ze-Google zinokuqwalaselwa njengezizahlulo. Baqokelela umxholo kwiiwebhsayithi ezininzi, zigcine kwi-database, zibonise kwaye zibonise umxholo okhishwe okanye okhishwe kubasebenzisi kwi-intanethi - best logo creator programs. Enyanisweni, uninzi lwezinto ezixutywe okanye ezikhishwe yi-injini zosesho zinegunya lobunikazi.
Ezinye zeendawo eziqingqiweyo zenziwe ukuba zenze imali kwi-intanethi isebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo zokuthengisa. Kwiimeko ezinjalo, zithiwa njenge-Made for AdSense websites okanye i-MFA. Ixesha elihlekisayo libhekisela kumaziko angenayo ixabiso elihlawulelwayo elindele ukutsala, ukukhwela kunye nokubandakanya iindwendwe kwiiwebhusayithi ezichaziweyo ukwenzela ukuchofoza kwiintengiso. IiWebhusayithi ze-AdSense kunye neeblogs zibhekwa njenge-power search engine spam. Bahlaziya iziphumo zophando ngemiphumo engaphantsi-eyanelisayo. Ezinye iindawo eziqhawulayo ziyaziwa ngokudibanisa namanye amawebhusayithi kwaye zijolise ekuphuculeni injini yokukhangela ngee-blog zangasese..Ngaphambi kokuba i-Google ihlaziywe i-algorithms yokukhangela, iintlobo ezahlukahlukeneyo zeesayithi ezisetyenziselwa ukuba zidume phakathi kweentshaphu ze-SEO zentengiso kunye nabathengisi. Basebenzisa le ngcaciso nge-spamdexing kwaye benza imisebenzi eyahlukeneyo.
Iziza ezilahlayo ziyaziwa ngokuphula imithetho ye-copyright. Nokuba uthathe umxholo kwimimandla evulelekileyo imithombo yecala lokukhutshelwa kwe-copyright, ukuba lenziwe ngendlela engayihloneli nayiphi na ilayisenisi. Ngokomzekelo, ilayisenisi ye-GNU Free Documentation kunye neelayisensi ze-Creative Commons ShareAlike zazisetyenziselwa kwi-Wikipedia kwaye zifuna ukuba umshicileli kwakhona we-Wikipedia kufuneka axelele abafundi ukuba umxholo ukopishwe kwi-encyclopedia.
Iinkqubo okanye iindlela apho (i-31) zewebhu (scraper websites) ezijoliswe kuyo zijoliswe kuzo zivela komnye umthombo ukuya kwenye. Ngokomzekelo, iiwebhusayithi ezinexabiso elikhulu leenkcukacha okanye umxholo onjenge-consumer electronics, ii-airline, kunye nezitolo zesebe, ziyakuthi zijoliswe rhoqo ngabakhuphiswano. Abakhuphisana nabo bafuna ukuhlala benolwazi malunga nexabiso langoku kunye nexabiso lemarike yerhwebo. Olunye uhlobo lwe-scraper ludonsa iintambo kunye nesicatshulwa ezivela kumasayithi aphakamileyo aphezulu amagama athile. Bavame ukuphucula isikhundla sabo kwiphepha lemiphumo ye-injini ye-injini (SERP) kunye ne-piggyback kwimigangatho yephepha lewebhu lokuqala. Izifo ze-RSS nazo zisengozini kwi-scrapers. I-scrapers ngokuqhelekileyo idibaniswa neefama zekhonkco kwaye ziyabonakala xa isayithi eliqhawulayo lidibanisa kwiwebhusayithi enye ngokuphindaphindiweyo.
Abaprogram abaye badala ii-scraper sites bangazithenga iziqulatho eziphelelwe yisikhathi ukuba ziphinde zisebenzise iinjongo ze-SEO. Ukusebenza okunjalo kuvumela iingcali ze-SEO zisebenzisa zonke i-backlinks zeli gama lesizinda. Abanye be-spammers bazame ukufanisa izihloko zeesayithi eziphelelwe yisikhathi kunye / okanye ukukopisha yonke into evela kwi-Internet Archive, ukugcina ubungqina kunye nokubonakala kweso siza. Iinkonzo zokubamba zihlala zibonelela ngeziko lokufumana amagama endlu ephelelwe yisikhathi, kwaye abachweli okanye abagaxeli basebenzise le nkcazelo ukuphuhlisa iiwebhusayithi zabo.